Ma gi ... akwukwo ole ka iguru? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ma gi ... akwukwo ole ka iguru?
Nyaahụ na-agagharị na twitter, ana m ahụ na ọtụtụ ndị na-ekwu maka akwụkwọ ha gụrụ n'afọ a. Ajuju ajuju ajuju a sitere na nnukwu webusaiti Akwụkwọ na Akwụkwọ.
N'etiti nzaghachi m hụrụ ndị kwuru na ha agụọla akwụkwọ 60, 65, 50 ma ọ bụ 20. Amalitere m ịme akaụntụ na ndị na-azọrọ na ha agụọla akwụkwọ iri isii ma ọ bụ karịa, na-apụta ntakịrị karịa otu akwụkwọ kwa izu. Ya mere amalitere m ịtụle ihe m gụrụ site na 60.
Na ọnụ ọgụgụ ọ bụghị ihe dị egwu, mana enwere ihe dọtara uche m: Anaghị m echeta akwụkwọ niile. Agụm agụ m bụ akwụkwọ m, ndị ahụ m gbaziri n’ụlọ ọba akwụkwọ na ụfọdụ ndị e binyere m.
Enweela m nke m enyochala kemgbe m hụrụ ha na shelf m yana o zuru ezu iji cheta ihe banyere ọgụgụ ahụ. Ma n’ime ndị na-enweghị m, ekwuputara m na echefuola m ụfọdụ.
N’ihi ya, m juru ihe mere m ji jụọ onwe m akwụkwọ ole m gụrụ n’otu afọ mgbe o doro m anya na ọtụtụ n’ime ha ahapụbeghị ọtụtụ akara n’ebe m nọ. Nke a bụ ya mere m ji weghachite ajụjụ a: Akwụkwọ ole ka hapụụrụ m akara n'afọ a? Ajuju ajuju karie ma obu ike karie.
N'afọ a, ekwesịrị m ikwupụta na achọpụtala m onye edemede nke masịrị m nke ukwuu na nke m gụrụ ọrụ abụọ: Isak rose. Azụrụ m Ime ụlọ gbara ọchịchịrị ma m wee gbaziri Ọzọ akwụkwọ akụkọ agha obodo nke chineke!
Nke mbụ emeela ka m nọrọ ala na enweghị ntụkwasị obi n'ihu kọmputa (gụọ ya, a na-atụ aro ya nke ukwuu) na nke abụọ m na-atụle akwụkwọ ntuziaka maka onye edemede ọ bụla na-achọsi ike (n'etiti nke m hụrụ onwe m).
M chetakwara ịgụ na ịgụgharị na iji ụbọ ụmụaka eme ihe na klaasị m A ụwa na-enweghị okwu de Bianca Estela Sanchez. Akwụkwọ na-enye ọ thatụ nke na-akasi m obi mgbe ụfọdụ n'ihi ịma mma ya na echiche efu.
Na njedebe m ga-egosi na nke a bụ afọ nke m chọpụtara oke egwu nke Spanish narị afọ nke iri abụọ: Ihe ọkụkụ Bohemia, na Ramon Maria del Valle Inclan. Agụrụ m ya ugboro abụọ, na-atụ m n'anya maka ọmarịcha ọrụ ebube a.
Ọ bụ ezie na agụwo m ọtụtụ akwụkwọ, mgbe m leghachiri anya azụ, ndị a bụ aha mbụ na-abata m n’uche.
Gi onwe gi ... akwukwo ole hapuru aha gi na afo a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ma gi ... akwukwo ole ka iguru?
Aha ya bụ Ramos dijo
Ọfọn afọ a m kpebiri na m mechara gụọ ụfọdụ kpochapụwo. Otu narị afọ kachasị mma nke ịnọrọ onwe onye na onye mgbịrịgba na-ata ahụhụ, achọpụtara m na ha dị mkpa iji mụta ịbụ ezigbo onye edemede. Ezi afọ ọhụrụ!
Zaghachi Aida Ramos
Akụkọ Magar dijo
Nke mbụ na-abata m n'uche n'ihi akara ụkwụ ha hapụrụ m bụ:
- «Silk» na «Crystal Lands» nke Alessandro Baricco dere
- "Nwoke Ochie na Oké Osimiri" nke Ernest Hemingway dere
- "Nkwekọrịta ọbara" nke Mario Benedetti dere
- "Nwunye Nwanyị" nke William Goldman
Itule nke afọ ọgụgụ m dị mma na, n’enweghị obi abụọ, ndị a abụwo ọgụgụ ọgụgụ icheta.
Zaghachi Akụkọ Magar
Anọ m na-eji http://www.goodreads.com Eziokwu ahụ bara ezigbo uru ịdebe ihe ị gụrụ, ihe masịrị gị na ihe ịchọrọ ịgụ, yana ihe ndị enyi gị gụrụ. Eziokwu bụ na ọ na-atọ ụtọ
M hapuru gi profaịlụ m https://www.goodreads.com/user/show/18285062-nacho-morato
Akwụkwọ kacha mma nke 2014
Nyochaa: 'Obi nke condor', nke Francisco Núñez Roldán dere